ငါးချဉ် ၀က်သားချဉ် စားသူတွေ ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ပါ – Myanmar Magazine
ငါးချဉ် ၀က်သားချဉ် စားသူတွေ ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ပါ
November 8, 2018 myanmarmagazine	ပြည်တွင်သတင်း
“ဆရာရေ.. ကျမလက်ကောက်ဝတ်က အရမ်းယားလို့ ပွတ်နေမိတာ အဲဒီနေရာက သံကောင်သေးသေးလေး အရှင်လေး ထွက်လာလို့”
“ဟား” ကိုယ်လည်း အံ့သြယုံသာ။
တကယ်တော့ သူအဲဒီနေရာမှာ ကွက်ပြီး ယားနေခဲ့တာ ၁ နှစ်လောက် ရှိပြီ။ ကျနော်လည်း ရွာလည်နေအောင် စဉ်းစားကုခဲ့တာ မအောင်မြင်။ နောက်တော့ ညည်း Fixed Drug Eruption ဖြစ်မှာပဲ လို့ ကောက်ချက်ချပေးခဲ့မိတာ။ သူကိုယ်တိုင်ကလည်း သူနာပြု ဆရာမ။ အပြင်ဆေးခန်းမှာ ကျနော်နဲ့ အတူ အလုပ်လုပ်နေသူ။ သူလည်း အမျိုးမျိုး စဉ်းစားပြီး ရှောင်တာ။ ပါရာစီတမောလား ထင်မိကြသေး။
နောက်တော့လည်း သူ့ခမျာ ပြန်ပြန်ဖြစ်နေတာ။ ထိုင်းမှာ သင်တန်းသွားတက်တော့မှ Gnathostomiasis (larva migrans profundus) အကြောင်း ဆလိုက်ထိုးသင်တော့မှ လူနာပုံတွေမှာ အားလုံးက ထမီဝတ်ထားကြတာ။ မြန်မာပြည်မှာ မပျောက်လို့ ထိုင်းလာကုတာ တွေရော။ ထိုင်းရောက်နေတဲ့ မြန်မာအလုပ်သမားတွေရော ဖြစ်လိုက်ကြတာ။
ထိုင်းပုံတောင် ခပ် နည်းနည်းရယ်။ ပြန်လာမှ ဆရာမကို သံချဆေး ပေးမိတော့တယ်။ ဆရာမ Albendol ဆေးစသောက်လို့ ၁ ပါတ် နေတော့ သန်ကောင် အရှင် ထွက်လာတော့။ အခုတော့ Sister ဖြစ်သွားပြီ။ နယ်မှာ။
cats, dogs, tigers, leopards, lions, mink, opossums, raccoons, poultry, frogs, freshwater fish, snakes or birds တွေမှာ ရှိတဲ့ သံလုံးကောင်က လူကိုယ်ထဲ ရောက်သွားတာ။ များသောအားဖြင့် အသားအစိမ်း (ငါးချဉ် ၀က်သားချဉ်) စားသူတွေမှာ ဖြစ်တာ။
နောက်တစ်ယောက် အသက် ၄၀ လောက်။ ဗိုက်နာလို့ ကျနော်နဲ့ ပြနေဆဲမှာ လေဖြတ်သလို တက်သွားလို့ ဆေးရုံတင်ရတယ်။ စီတီမှာ ဘာမှ မတွေ့ဘူး။ နောက်တော့ ပြန်ကောင်းသွားတယ်။ နောက်လတွေမှာမှ Eosinophilia နဲ့ ယားပြီး ဆေးကုရတာ ၃ လတောင်ကြာတယ်။ (Neurognathostomiasis)
ပုံထဲက ကလေးမလေးက ညာ လက်ဖျံနဲ့ လက်မောင်းမှာ နီပူယားယောင် ဖြစ်လိုက် ပျောက်လိုက်နဲ့ ၁ နှစ်ရှိပြီ။ ရှမ်းပြည်က။ မပျောက်တော့လို့ မန်းလေး လာပြတာ။ ပုံမှာလိုပဲ အညို အမည်း စွဲနေပြီ။ သွေးထဲမှာ Eosinophilia နဲ့။
“ငါးချဉ်စားလား”“စားတယ်။ အရမ်းကြိုက်တာ။”“ချက်စားလား။ အစိမ်းစားလား။”
ခုလည်း ဆရာမ တစ်ယောက်ကို ၀လာလာလိုက်တာလို့ နှုတ်ဆက်မိတော့ Allergy ဆိုပြီး Prenisolone သောက်နေရလို့ပါတဲ့။ ဟာ မှားနေပြီ။ Prednisolone ဆိုတာ ဘာမှ အကြောင်းရှာမတွေ့မှ သက်သာအောင်ပေးတာမျိုး။ ဘယ်နေရာလဲ လို့ မေးတော့
ညာလက်မောင်းရင်းရယ် ညာဖက်ရင်ဘတ် အပေါ်ပိုင်းရယ်ကို ပြတယ်။ဒီလို Localized ဆိုရင် နေရာကွက်ပြီး allergy ဖြစ်တာ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ သံချပြီးပြီလားလို့ မေးလိုက်တော့ Albendazole 400 mg HS3days သောက်ပြီးပြီတဲ့.
မှားပြီ။ ဒါက လူသန်ကောင်မဟုတ်ဘူး။ တိရိစ္ဆာန် သံကောင်။ 400 bd for3weeks ၄၂ လုံးတောင် သောက်ရမှာလို့ ပြောလိုက်ရတယ်။တနေရာထဲ ကွက်ပြီး ယားလိုက် ယောင်လိုက် ဖြစ်နေရင် Gnathostomiasis စဉ်းစားပါ။ Albendazole 400 twice daily for 21 days ပါ။
Medicine / Gnathostomiasis
← ဆိုင်ကယ်တူးဘောက်အတွင်းမှ ၁၉ သိန်း ခိုးယူသွားးသူအား ဖမ်းမိ
သရုပ်ဆောင်ကျော်ထူး လာရောက်ကန်တော့လို့ ဝမ်းသာမျက်ရည်တွေကျခဲ့ရတဲ့ ဦးမန်းဝင်း →
မင်္ဂလာဆောင်တွင် သီချင်းဆိုရန် အလှည့်လုရာမှ ဓားနှင့်ခုတ်သဖြင့် တစ်ဦးသေဆုံး
December 18, 2018 myanmarmagazine Comments Off on မင်္ဂလာဆောင်တွင် သီချင်းဆိုရန် အလှည့်လုရာမှ ဓားနှင့်ခုတ်သဖြင့် တစ်ဦးသေဆုံး
March 24, 2019 myanmarmagazine Comments Off on သစ်သားနဲ့ ဆောက်ထားတဲ့အိမ်တွေမှာ ညည တောက်ခေါက်သံတွေ ထွက်နေတယ်ဆိုရင်…!
တစ်နာရီ သိန်း ၆၀ နဲ့ ဟယ်လီကော်ပတာ စီးနိုင်ပြီ
December 3, 2018 myanmarmagazine Comments Off on တစ်နာရီ သိန်း ၆၀ နဲ့ ဟယ်လီကော်ပတာ စီးနိုင်ပြီ